काँचो प्याज खादाँ हुने फाइदाहरु! जानकारीको लागी पढेर शेयर गराैं ! | सुदुरपश्चिम खबर
काचो, पकाएर वा सलादको रुपमा खान सकिने तरकारी हो, प्याज । तरकारीमा प्याजको प्र’योग गरे यसले स्वाद बढाउने गर्दछ । प्याजमा सल्फर, एमि’नो एसिड, एन्टीवायोटिक्स, फाइव’र, क्याल्शियम, आयोडीन, फस्फोरस, मिनरल्स र भिटामि’नका गुणहरु हुन्छ ।
यी हुन् का’चो प्याज खादा हुने फाइदाःप्याजमा रहेको रेशा’दार तत्व पेटको बिरामीलाई अत्य’न्त फाइदा पुर्याउँछ ।नियमित एक टुक्रा काँचो प्याज खाए कब्जियत र एसि’डिटीको समस्या हराएर जान्छ । काचो प्याजको सेवनले पाचन प्रक्रि’या राम्रो बनाउँछ ।
काँचो प्याजको सेवनले रक्त’चाप निय’न्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । नियमित दुई चम्मच प्याजको रस पिएमा किड्नी’को पत्थरी हटाउँछ । काँचो प्याज खाए शरीरमा ईन्सु’लिन बन्दछ । रुखाखोकी, कफ तथा सा’मान्य ज्वरोलाई नि’यन्त्रण गर्न प्याजको रश उ’पयुक्त हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःजाडो मौसममा यी मसला खानु हुन्छ एकदमै लाभदायक !!ःमौसममा परिवर्तन आउँदा र शरीर चिसो हुँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । चीसो बेलामा शरीरलाई तातो हुने कुरा खानुपर्छ । शरीरलाई भित्रैबाट तातो राख्नका लागि गरम मसला नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ । भोजनमा केही मसलाको प्रयोग गर्दा शरीर पनि तातो हुन्छ र रोगबाट पनि बचिन्छ । यी मसलाहरूको बारेमा थप जानौं । यी मसलाहरुको प्रयोगले रुघा खोकीबाट बच्न सकिन्छ ।
मरिचःखानाको स्वाद बढाउनुका साथै मरिचले अनेकौं रोग पनि भगाउँछ । जाडोमा मरिच खाँदा रुघाखोकी, पेटको संक्रमण र ज्वरोबाट बचिन्छ । महमा मिसाएर खाँदा स्मरणशक्ति तीखो हुन्छ ।
जाइफलःऔषधीय गुणहरूले भरपूर जाइफलले खाना पचाउँछ, भोक नालग्ने समस्या हटाउँछ, पेटको रोग भगाउँछ र पाचक रस बढाउँछ । यसलाई घोटेर तातो पानीसँग पिउँदा छेरपटी, रुघा र खोकी निको हुन्छ ।
शरिरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन यस्ता कुरामा विशेष ख्याल गर्नुस् !